Ukuhlaziywa okufishane komsebenzi kaCésar Vallejo | Izincwadi Zamanje
Isithombe - Wikimedia / Enfo
Vallejo Wayengomunye wababhali ababaluleke kakhulu bekhulu lama-XNUMX, hhayi ezweni lakhe kuphela, ePeru, kodwa nakwamanye amazwe akhuluma iSpanishi. Udlale izinhlobo ezahlukahlukene zemibhalo, okugqame kakhulu kuzo yizinkondlo. Empeleni, usishiyele izincwadi ezintathu ze izinkondlo lokho kuphawule inkathi, esizohlaziya ngayo kule ndatshana.
Uma ufuna ukwazi kabanzi ngomsebenzi wezinkondlo walo mbhali omkhulu, khona-ke sizokutshela ngomsebenzi wakhe wezinkondlo.
1 Abamemezeli abamnyama
3 Izinkondlo zabantu
4 Izintshisakalo zikaCésar Vallejo
Abamemezeli abamnyama ...
Incwadi Abamemezeli abamnyama bekungokokuqala ukuthi imbongi ibhale. Wakwenza phakathi neminyaka ka-1915 kanye no-1918, yize yayingashicilelwanga kwaze kwaba ngo-1919 ngoba umbhali wayelindele isandulela sika-Abraham Valdelomar, into engakaze ifezeke.
Ukuqoqwa kwezinkondlo ngu yakhiwe izinkondlo ezingama-69 zehlukaniswe ngamabhulokhi ayisithupha ngaphezu kwenkondlo yokuqala enesihloko esithi "Abamnyama Abamnyama" okuyiwona futhi onikeza incwadi igama layo. Ezinye zihlelwe kanje:
Amapaneli we-Agile, anezinkondlo eziyi-11 sezizonke.
Abatshuzi, abanezinkondlo ezi-4.
Kusuka ezweni, ngezinkondlo eziyi-10.
I-Imperial Nostalgia, enezinkondlo eziyi-13.
Ukuduma kwezulu, lapho kunezinkondlo ezingama-25 (yibhlokhi enkulu kunazo zonke).
Amaculo avela ekhaya, aqeda umsebenzi ngezinkondlo ezi-5.
Leli qoqo lokuqala lezinkondlo zikaCésar Vallejo linikeza a ukuvela kombhali uqobo njengoba ezinye zalezo zinkondlo zihambisana nesikhathi samanje namafomu e-classical metric nama-strophic, okungukuthi, ukulandela umugqa walokho okwasungulwa. Kodwa-ke, kukhona ezinye ezicishe zifane nendlela yembongi yokuziveza ngayo kanye nokuba nenkululeko ethe xaxa lapho izichaza.
Ziningi izihloko ezahlukahlukene ezihlanganisiwe, ezibandakanya ukufa, inkolo, indoda, abantu, umhlaba ... konke ngokombono wayo imbongi.
Kuzo zonke izinkondlo ezikule ncwadi, edume kakhulu futhi ehlaziywa kakhulu yileyo enikeza lo msebenzi igama, "Abamemezeli abamnyama."
Trilce (Izincwadi ...
Incwadi Hlunga bekungeyesibili ebhalwe nguCésar Vallejo futhi ngaphambi nangemva maqondana neyokuqala. Isikhathi okwabhalwa ngaso, ngemuva kokushona kukanina, ukwehluleka kothando nehlazo, ukushona komngane wakhe, ukulahlekelwa ngumsebenzi, kanye nesikhathi asichitha ejele izinkondlo eziyingxenye yencwadi zazingezinhle ngokwengeziwe, ngemizwa yokukhishwa inyumbazane kanye nodlame kukho konke lokho imbongi ebikuphila.
Leli qoqo lezinkondlo lakhiwe yizinkondlo ezingama-77 esezonke, akukho neyodwa yazo enesihloko, kodwa inamba yesiRoma kuphela, ehluke ngokuphelele encwadini yakhe yangaphambilini, lapho ngayinye yayinesihloko futhi yaqoqwa yaba ngamaqembu. Esikhundleni salokho, nge Hlunga ngamunye uzimele komunye nomunye.
Mayelana nenqubo yakhe yezinkondlo, kukhona ukuhlukana nalokho okwaziwa ngembongi. Esimweni esinjalo, ukugqashula kunoma yikuphi ukulingisa noma ithonya ebinakho, uyazikhulula kumamethrikhi nasenkondlweni, futhi usebenzisa amagama akhiwe kakhulu, kwesinye isikhathi awadala, okwenza kube nzima ukuwaqonda. Ngaphezu kwalokho, wenza amagama, asebenzise amagama esayensi ngisho nezinkulumo ezithandwayo.
Lezi zinkondlo ziyi-hermetic, ziyayixoxa indaba kodwa ngaphandle kokuvumela umuntu ukuthi abone ngaphansi kwazo, kube sengathi kudweba umugqa phakathi komphakathi nokuthi uyini umbhali. Konke okuhlangenwe nakho kwakhe ngesikhathi ebhala lo msebenzi kubenza ukuthi bagcwale ubuhlungu, usizi nomuzwa wobutha kubantu nasempilweni.
Izinkondlo Zabantu (Izinkondlo ...
Ngemuva kokufa, incwadi Izinkondlo zabantu yashicilelwa ngo-1939 ehlanganisa imibhalo eyahlukene yembongi kusukela ngonyaka ka 1923 no 1929 (Poems in prose) kanye nokuqoqwa kwezinkondlo «Spain, susa le ndebe kimi».
Ngokukhethekile, umsebenzi unezinkondlo ezingama-76 sezizonke, Ezingu-19 zazo ziyingxenye yeZinkondlo ku-Prose, enye ingxenye, engu-15 ukuba ngqo, kusukela ekuqoqweni kwezinkondlo zaseSpain, susa le ndebe kimi; futhi konke okunye bekungafanele incwadi.
Le ncwadi yokugcina ingenye yezincwadi ezinhle kakhulu zikaCésar Vallejo lapho "indawo yonke" umlobi ayithola ngokuhamba kwesikhathi ibonakala kangcono kakhulu futhi adlula ngayo izincwadi ezedlule ezanyatheliswa.
Yize izingqikithi akhuluma ngazo uVallejo ezinkondlweni zakhe zaziwa ngendalo yakhe yaphambilini, iqiniso ukuthi kunomehluko endleleni yakhe yokuveza imizwa yakhe, okulula ukuthi umfundi ayiqonde, ngokungafani nalokho okwenzeka kuTrilce, okuthunyelwe kwakhe kwangaphambilini.
Yize emibhalweni kusekhona i- Isichasiselo ngokungeneliseki kwempilo ngumbhali, Akukona "njengokulindela okubi" njengakweminye imisebenzi, kepha kunalokho kushiya umucu wethemba, sengathi ufuna ukuthonya bonke abantu ukuze ushintsho emhlabeni lube luhlangene hhayi umuntu ngamunye. Ngakho-ke, kukhombisa ukukhohlisa ngomhlaba owenziwe ngobunye futhi osuselwe othandweni.
Ukuba ngaphezulu kokuhlanganiswa kwemisebenzi emithathu ehlukene, Izinkondlo ngephrozi; Spain, susa le ndebe kimi; nalabo abahambisana ne- Izinkondlo zabantu, iqiniso ukuthi kukhona umehluko omncane phakathi kwabo, okugqamisa amaningana ngokwahlukana ngokwamabhulokhi ababhekise kuwo.
Izintshisakalo zikaCésar Vallejo
Emhlabeni wesibalo sikaCésar Vallejo kunezifiso eziningi ezingatshelwa ngaye. Enye yazo yilokho le mbongi ibinokuthambekela kwezenkolo ngoba, bobabili umkhulu kayise nobaba wakhe babehlobene nenkolo. Owokuqala njengompristi weMercedarian waseSpain, kanti owesibili waba ngowenkolo yaseSpain eya ePeru. Kungakho umndeni wakhe wawuthanda inkolo kakhulu, yingakho ezinye izinkondlo zokuqala zombhali zazinomqondo ophawulekayo wenkolo.
Eqinisweni, umbhali bekulindeleke ukuthi alandele ezinyathelweni zogogo nomkhulu wakhe, kodwa ekugcineni waphendukela ezinkondlweni.
Kuyaziwa ukuthi uVallejo noPicasso bahlangana kaningana. Isizathu sokuthi kungani umdwebi waseSpain nomdwebi wemidwebo edwebe imidwebo emithathu eyenziwe nguCésar Vallejo asaziwa ngokuqinisekile, yize sinamazwi, ngamagama kaBryce Echenique, ukuthi womabili ahlangana eCafé Montparnasse, eParis futhi, yize bengazi ezinye Lapho uPiccaso ezwa ngokufa kukaVallejo, wanquma ukuthatha isithombe.
Kunomunye umbono, kaJuan Larrea, lapho ngemuva kokushona kwale mbongi, emhlanganweni ayenawo noPicasso, ememezele izindaba kuye ngaphezu kokumfundela ezinye zezinkondlo zakhe, lapho umdwebi athi khona yena ngenza isithombe ».
Izimbongi azivamile ukuba ngumthombo wokukhuthaza ama-movie. Kodwa-ke, okufanayo akwenzeki ngoCésar Vallejo obeziqhenya ngokugqugquzela, ngenkondlo yakhe "Ngikhubekile phakathi kwezinkanyezi ezimbili", lo i-movie yaseSweden Izingoma ezivela esitezi sesibili (kusuka 2000), lapho kusetshenziswa izingcaphuno nemishwana evela kuleyo nkondlo.
Ngaphezu kwalokho, le filimu yazuza umklomelo weSpecial Jury Prize kuCannes Film Festival.
Yize uVallejo aziwa kakhulu ngezinkondlo zakhe, iqiniso ukuthi wadlala cishe zonke izinhlobo zemibhalo futhi ubufakazi balokhu ukuthi izindaba, amanoveli, ama-eseyi, imidlalo yeshashalazi, izindaba ziyagcinwa ...
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Abalobi » Umsebenzi wezinkondlo zikaCésar Vallejo
UVallejo akungabazeki ukuthi uyimbongi ebaluleke kakhulu ngesikhathi sakhe. Umlando wakhe wemisebenzi uyisibonelo sesikhathi sethu samanje.Ungasetshenziswa njengomkhombandlela wokubhekana nesikhathi sethu esibi sezomnotho.
Izincwadi eshalofini lezincwadi. Izindaba nababhali bezolo, namuhla naphakade